दिनमा कति पानी पिउनु जरुरी हुन्छ ? शरीरको तौल अनुसार दैनिक पिउनुपर्ने पानीको मात्रा हेर्नुहोस – List Khabar
Home / समाचार / दिनमा कति पानी पिउनु जरुरी हुन्छ ? शरीरको तौल अनुसार दैनिक पिउनुपर्ने पानीको मात्रा हेर्नुहोस
दिनमा कति पानी पिउनु जरुरी हुन्छ ? शरीरको तौल अनुसार दैनिक पिउनुपर्ने पानीको मात्रा हेर्नुहोस
admin December 9, 2021 समाचार Leaveacomment 86 Views
काठमाडौँ । हामी प्राय सबै जसोले निकै तिर्खा लाग्दा मात्र पानी पिउने गर्छै । तर त्यस्तो बानीले शरीरमा आवश्यक पर्ने पानीको कमी भएर डिहाइड्रेशन हुने गर्छ । डिहाइड्रेशनका कारण शरीरमा विभिन्न खाले समस्या उत्पन्न सक्छ । तर, यसबारे आम जनतालाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा विश्वका आधाभन्दा बढी मानिस अञ्जानमै डिहाइडे्रशनका कारण विभिन्न रोगको सिकार हुने गर्छन् ।
Previous कतारले बिश्वकपका लागी श्रमिकलाई ४ महिना घर पठाउने, घर फर्कनेमा बढी नेपाली पर्ने
Next विद्यार्थीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि विद्यालय आजदेखि बन्द